Munaasabadaha 5 iyo xaqiiqooyinka 5 ee isdhexgalka ee BIM - GIS - Geofumadas
Febraayo, 2019 ArcGIS-ESRI, Geospatial - GIS
Chris Andrews wuxuu ku qoray maqaal qiimo leh jumlad xiiso leh, markii ESRI iyo AutoDesk ay raadinayaan qaabab ay ugu keenaan fududeynta GIS meel u dhow qaab dhismeedka kaasoo isku dayaya inuu meel mariyo BIM oo ah halbeeg xagga injineernimada, dhismaha iyo geedi socodka dhismaha. In kasta oo maqaalku uu qaadanayo aragtida labadan shirkadood, hadana waa aragti aragti xiiso leh, in kasta oo aysan qasab ku ahayn istiraatiijiyaddii ay ku hadli jireen dadka kale ee suuqa ku jira sida Tekla (Trimble), Geomedia (Hexagon) el Imodel.js (Bentley). Waan ognahay in qaar ka mid ah jagooyinka ka hor BIM ay ahaayeen "CAD ka dhigaya GIS" ama "GIS ku habboon CAD".
Taariikhda yar ...
Tobankii sano ee 80 iyo 90, tiknoolijiyada CAD iyo GIS waxay u soo baxeen sidii fursado tartan loogu talogalay xirfadlayaasha loo baahan yahay in ay la shaqeeyaan macluumaadka qallafsan, taas oo inta badan lagu wargaliyo waraaqaha. Waqtigaas, kartida software-ka iyo kartida qalabka ayaa xadideysa baaxadda waxyaallaha la samayn karo tiknoolijiyada taageerada kombuyuutarka, labadaba qorista iyo falanqaynta maabka. CAD iyo GIS, waxay u muuqatay in ay ahmiyad weyn u leedahay qalabyada kombiyuutarada, si ay ula shaqeeyaan joomatarka iyo xogta, kuwaas oo soo saari doona dukumiintiga warqadda.
Maaddaama ay softiweerku iyo kombuyuutarradu noqdeen kuwa horumarsan oo casriyeysan, waxaan goob joog ka nahay takhasuska dhammaan teknoolojiyadda nagu xeeran, oo ay ku jiraan CAD iyo GIS, iyo dariiqa si buuxda loogu shaqeynayo dhijitaalka (oo sidoo kale loo yaqaan "digitized"). Tikniyoolajiyadda CAD waxay markii hore diiradda saareysay howlaha otomatiga ah ee laga soo qaado sawirka gacanta. Qaabaynta macluumaadka qaabaynta (BIM), oo ah geedi socod lagu gaaro hufnaan wanaagsan, inta lagu gudajiray naqshadeynta iyo dhismaha, ayaa si tartiib tartiib ah ugu riixday BIM iyo aaladaha naqshadeynta ee CAD abuuritaanka sawirro iyo moodello caqli ku dhisan oo dijitaal ah oo ah hantida dhabta ah ee adduunka. . Moodooyinka lagu sameeyay qaababka naqshada ee casriga ah ee BIM waa kuwo casri ku filan oo la jaanqaadi kara dhismaha, lagu helo cilladaha heerarkii hore ee naqshadeynta isla markaana dhaliya qiyaasaha saxda ah, ee ku aaddan u hoggaansanaanta miisaaniyadeed ee mashaariicda sida isbeddelka isbeddelka isbeddelaya, tusaale ahaan.
GIS waxay sidoo kale kala duweneyd oo sii xoojisay awooddeeda waqtigeeda. Haddaba, GIS xamili karo kun oo malaayiin ka mid ah dhacdooyinka ka dareemayaal ku nool qurxino ka petabytes lagu daydo 3D, iyo images in browser ah ama taleefanka gacanta, iyo Analytics saadaal ah, adag, iyo darta on qanjidhada badan kala firdhiyey processing ee daruur Map, oo waxay bilaabeen sidii qalab gorfaynta on warqad, waxa uu noqday isgaarsiinta a muraayada ama portal si synthesize adag kala duwan ee foomka aadanaha-interpretable ah.
Loo xaqiiqsado culayska ka buuxa workflows dhafan dhexeeya BIM iyo GIS, domains muhiim ah sida Smart Cities iyo digital ah Engineering, waa in aan baaro sida labadan Caalamka tallaabsan karo kartida shaqo ee warshadaha iyo dhaqaaqaan workflows dhameystiraan digitized, taas oo noo ogolaaneysa in aan kala furfurno geedi socodka waraaqaha ee boqolkii sano ee la soo dhaafay.
Khayaal: BIM waa ...
Bulshada GIS, mid ka mid ah waxyaabaha ugu caansan ee aan arko oo maqlo waa Qeexitaan BIM oo ku salaysan fahamka dibadda ee dunida BIM. Waxaan inta badan maqlaa in BIM uu yahay maamul, muuqaal, qaabaynta 3D ama in ay tahay tusaale ahaan dhismayaasha. Nasiib darro, midkoodna midkoodna maahan waxa BIM loo isticmaalo, inkasta oo laga yaabo inay kordhiso ama awood u yeelato qaar ka mid ah kartidooda ama shaqooyinkooda.
Asal ahaan, BIM waa geedi socod lagu badbaadinayo wakhti iyo lacag, iyo in la gaaro natiijooyin kalsooni leh inta lagu jiro habka qaabeynta iyo dhismaha. model 3D The ahaan inta lagu jiro geedi socodka BIM design ah, waa byproduct ka mid ah baahida loo qabo in duwo design gaar ah, qabsadaan jir ah sida ay tahay, si ay u qiimeeyaan kharashka ku xasuuqeen, ama qofka oo isbedesha record sharci ama heshiis in hantida jirka ah . Muuqaalku wuxuu noqon karaa qayb ka mid ah geeddi-socodka, maxaa yeelay waxay ka caawisaa bini-aadamka inay fahmaan jaangooyooyinka, astaamaha iyo jimicsiga ee naqshad la soo jeediyey.
Sida aan horey u soo baran jirey Autodesk, 'B' ee BIM macnaheedu waa 'Dhis, fiilo' ma 'dhisidda, magaca'. Autodesk, Bentley iyo alaab-qeybiyeyaasha kale waxay la shaqeeyeen warshadaha si ay u dhejiyaan fikradaha hab-raaca BIM si ay u noqdaan raadadka sida tareennada, waddooyinka iyo jidadka, adeegyada dadweynaha iyo isgaarsiinta. Wakaalad ama urur kasta oo maamula oo dhisto hantida jireed ee gaarka ah ayaa leh daneyn shakhsi ahaaneed si loo hubiyo in qandaraasleyaashooda naqshadaynta iyo injineernimada ay isticmaalaan hababka BIM.
Xogta BIM waxaa suuragal ah in loo adeegsado hawlaha hawlgalka ee hanti ma guurtada ah. Tani waa mid go'an, tusaale ahaan, ee cusub Heerarka ISO ee BIM, kuwaas oo lagu wargeliyay, iyadoo la marayo nidaamka lagu qiyaaso heerarka Boqortooyada Ingiriiska, oo la aasaasay sanooyinkii ugu dambeeyay ee 10. Inkasta oo soo jeedintan cusubi ay diiradda saarayso isticmaalka xogta BIM, ee wareegga nolosha ee hanti ma guurtada ah, weli wali waxay cadahay in keydinta kharashka dhismaha, sida ku cad qodobka, ay yihiin kuwa ugu muhiimsan qaadashada BIM.
Marka loo eego hab-raaca, is-dhexgalka tiknoolajiga GIS wuxuu noqonayaa mid aad u dhib badan marka laga reebo kaliya akhrinta jaantusyada iyo sifooyinka ka yimid qaabka 3D oo lagu muujinayo GIS. Si aad dhab ahaantii la fahmo sida aad u isticmaali karto macluumaadka ku jira BIM iyo GIS, waxaan inta badan ka heli in aynu u leeyihiin in ay xadaynta fikirka dhismaha ama wadada our, iyo fahmaan sida macaamiisha u baahan in la isticmaalo tiro balaadhan oo ah xogta mashruuca ee macnaha guud geospatial. Waxa kale oo aanu ka helay diiradda in model ah, mararka qaarkood waxay ka dhigan tahay in aan iska fududaysto ugu fudud, socodka shaqooyin badan aasaasiga ah ee laga maarmaanka u ah geeddi-socodka oo dhan, sida la isticmaalayo macluumaadka la ururiyey ee beerta si dhab ah in a dhismayaasha site for Ku xir meesha ay ku jiraan macluumaadka moodeelka ah ee kormeerka, dakhliga iyo sahanka.
Ugudambeyn, waxaan gaari karnaa fahan guud iyo natiijooyin, haddii aan "u gudubno farqiga" si aan uga shaqeyno kooxo isku-dhafan, kuwaas oo u horseedi kara kala duwanaanshaha xallinta dhibaatada. Taasi waa sababta aan ugala shaqeyno Autodesk iyo shuraakada kale ee booskan.
Iskaashiga u dhexeeya Esri iyo Autodesk, oo lagu dhawaaqay markii ugu horeysay ee 2017, ayaa ah tallaabo weyn oo loogu talagalay in la isu keeno koox kooxo kala duwan leh si wax looga qabto arrimaha la qabsashada BIM-GIS.
Khayaal: BIM si toos ah ayuu u bixiyaa qaababka GIS
Mid ka mid ah fikradaha ugu adag si uu u gudbiyo in a user aan takhasus ku BIM-GIS, waa in inkastoo model BIM uu u muuqdo mid si sax ah sida buundada ama dhismaha khasab ma aha waxay leeyihiin sifooyinka uu ka samaysan yahay qeexitaanka dhismaha ama buundada ujeedooyin khariidaynta ama ee falanqeynta geospatial.
At Esri, waxaan ka shaqaynaynaa khibrado cusub oo loogu talagalay in lagu dhiso maareynta guusha iyo maamulka khayraadka, sida ArcGIS Hore. Isticmaalayaal badan ayaa filayay in shaqadeena ay la socoto xogta Autodesk Revit, waxaan si toos ah uga saari karnaa geometries guud, sida qolalka, meelaha, qorshooyinka dhulka, huurada dhismaha iyo qaab dhismeedka dhismaha. Xitaa ka sii fiican, waxaan soo saari karnaa meshaalka wareegga si loo arko sida bini'aadamku u socon lahaa dhismaha.
Dhamaan jaantusyadani waxay noqon doonaan kuwo aad u faa'iido leh ee codsiyada GIS iyo maareynta hawlaha maareynta hantida. Hase yeeshee, midkoodna lagama maarmaanka u ah dhismaha dhismaha, guud ahaanna, ma jirno habka dib u habeynta.
Waxaan tijaabineynaa teknoolajiyada si loo xisaabiyo joomatijiyadan, laakiin qaarkood waxay bixiyaan caqabado cilmi-baaris oo adag iyo shaqo-barar oo walaac ku abuuray sanadka. Waa maxay biyaha aan loo baahnayn? Waa maxay duubka yar ee dhismaha? Miyay aasaaska ku jirtaa? Sidee ku saabsan balakoonnada? Waa maxay raadiyaha dhismaha? Ma waxaa ku jira qalabixin? Mise waa mida kaliya ee isgoysyada qaabdhismeedka dhulka?
Si loo hubiyo in moodooyinka BIM ay ku jiraan shaqooyinka lagama maarmaanka u ah hawlaha GIS, milkiilayaasha mulkiilayaasha waa inay qeexaan macluumaadka gaarka ah ee macluumaadkaas ka hor intaan naqshadaynta iyo dhismuhu bilaabmin. Sida casharrada isbeddelka qumman ee CAD-GIS, oo xogta CAD-ga la ansixiyey ka hor inta aanay noqon GIS, habka BIM iyo xogta la helay waa inay sheegaan oo ay ku jiraan sifooyinka loo isticmaali doono inta lagu jiro maareynta wareegga nolosha ee dhismaha, haddii taasi tahay ujeedo ah in la abuuro xogta BIM.
Waxaa jira ururo aduunka oo dhan ah, sida caadiga ah dawladaha iyo kuwa ka shaqeeya nidaamyada xakamaynta ama nidaamyada hantida, kuwaas oo bilaabay inay ubaahan yihiin sifooyinka nololeed ee nolosha iyo sifooyinka lagu darayo content BIM. Dalka Mareykanka UU., Maamulka Adeegyada Dowladda waxaa kor u qaadida dhismayaasha cusub iyada oo loo marayo shuruudaha BIM iyo hay'adaha sida maamulka Veterans ay sameeyeen dadaal weyn si faahfaahsan xubno BIM ah, sida qolalka iyo meelaha in uu noqon doono mid waxtar leh in maamulka xarumaha ka dib markii dhismaha la dhisay. Waxaan ogaanay in garoomada diyaaradaha, sida Denver, Houston iyo Nashville, ay haystaan ​​xakameyntooda xogtooda BIM oo badanaa haysta xog aad u xaddidan. Waxaan soo arkay qaar ka mid ah wadahadalo weyn SNCF AREP kii dhisay dhamaystiran barnaamijka BIM ah si ay u tababaraan saldhigyada, oo ku salaysan fikrada in xogta loo isticmaali doono hawlaha aalada BIM iyo maaraynta hantida. Waxaan rajeynayaa inaan wax badan ka arko mustaqbalka.
La wadaago nala tan Airport George HW Bush Houston International (halkan ka muuqda AppBuilder Web) xogta muujinaya in haddii xogta BIM waa yoolka, sida caadiga ah iyada oo loo marayo qalabka qiimaynta sawir ka dibna la nidaamsan dhex dari karaa GIS ah . Sida caadiga ah, waxaan arki macluumaad dhismaha in lagu daydo BIM ka hor inta macluumaadka arkaysid la xiriira FM
Khuraaf: Waxaa jira qaab fayl ah oo bixin kara isdhexgalka BIM-GIS
Shaqooyinka isdhexgalka ganacsiga caadiga ah, miis ama qaab ayaa loo qoondeeyey miis kale ama qaab kale, si loo hubiyo gudbinta macluumaadka u dhexeeya teknoolojiyada kala duwan. Sababo badan awgood, qaabkani waa mid sii kordheysa oo aan ku haboonayn in la daboolo baahida qofka tXogta macluumaadka ee qarniga 21:
Macluumaadka ku kaydsan faylasha way adag tahay in la gudbiyo
Qeybinta macluumaadka iyada oo la adeegsanayo domains adag waxay leedahay khasaare
Qoondaynta xogta waxay muujinaysaa dib-u-eegida dhamaystiran ee nuxurka nidaamyada
Khariidadda xogta badanaaba waa mid isku mid ah
Tiknoolajiyada, ururinta xogta iyo shaqa-adeegaha isticmaalka ayaa si isdaba-deg ah isu bedelaya in la hubiyo in dhex-dhexaadinta maanta ay noqon doonto wax ka yar wixii berrito ah
Si loo gaaro digitization run, matalaad digital ah hanti, waa in uu noqdaa heli karo in jawi qaybiyey in la casriyeeyey karo iyo updated si loo waafajiyo wadatashi, falanqayn iyo kormeer dheeraad ah oo adag in ka badan waqti iyo hareeraha nolosha faa'iido leh ee hantida.
model xogta A aysan dabooli karin wax kasta oo lagu daro karo BIM iyo GIS dhex warshadaha iyo baahida macaamiisha aadka u kala duwan, sidaas darteed ma jiro format hal qabsan kartaa nidaamka oo dhan si wuxuu si dhakhso ah u heli karaa oo uu noqon karaa mid laba jibbaaran. Waxaan rajeynayaa in farsamooyinka la qabsashada sii wadaan in ay hagaagaan waqti ka dib, sida BIM noqdo doonee, ee content iyo waxaa loo baahan yahay in la isticmaalo xogta BIM ee macnaha guud ee GIS for meertada maaraynta hantida, waxa uu noqon doonaa dheeraad ah oo muhiim ah oo loogu talagalay rukunka waayeelka ah
Ujeedada isdhexgalka ee BIM-GIS waa in ay awood u yeeshaan hawlaha shaqo-abuurka si ay u abuuraan hantida oo ay u maareeyaan. Ma jiro isbeddelo, si fiican loo qoondeeyey udhexeeya labadaan shaqadood.
Khuraafi: Ma si toos ah u isticmaali kartid bIM-gaaga GIS
Lid ku ah wada hadal ku saabsan sida loo heli muuqaalada GIS in xogta BIM, waxaynu inta badan maqalnaa in aysan ahayn mid macquul suurto gal ah in si toos ah u isticmaali content ee GIS BIM sababo bilaabo kakanaanta semantic, cufnaanta hantida, ka qiyaasta hantida. Doodda ku saabsan isdhexgalka ee BIM-GIS guud ahaan ayaa loogu talagalay qaababka faylalka iyo hawlaha shaqo-saaridda, Dib-u-beddelka iyo Lacagta (ETL).
Xaqiiqdii, waxaan mar hore u isticmaaleynaa BIM si toos ah GIS. Xagaagii lasoo dhaafay, waxaan ku soo bandhigaynaa awood u leeyahay inuu akhriyo file Revit in ArcGIS Pro si toos ah. Waqtigaas, model ah ula falgalaan karaa ArcGIS Pro sida haddii kooban astaamaha GIS iyo markaas diinta qaabab kale GIS caadiga ah by dadaal buugan, haddii ayaa la rabaa Iyadoo ArcGIS Pro 2.3, waxaan sii deyneynaa awoodda ay ku daabacdo nooca lakabka cusub, lakabka goobta dhismaha , kaas oo u oggolaanaya inuu isticmaalo si uu u soo koobo naqshadaha, joomatari iyo astaamaha faahfaahinta qaabka Dib u habeynta qaab qaab sarrif leh loo abuuray khibradaha GIS. Lakabka goobta dhismaha, kaas oo lagu sharxi doono faahfaahinta furan ee I3S, wuxuu dareemayaa sida qaabka loo yaqaan "Revit model" ee userka wuxuuna ogolaanayaa isdhexgalka iyada oo la adeegsanayo qalabyada GIS iyo hababka caadiga ah.
Waan ku riyaaqay inaan ogaado taas oo ay ugu wacan tahay helitaanka bandwidth badan, kaydinta raqiis ah iyo wax ka jaban, waxaan ka guureynaa 'ETL' ilaa 'ELT' ama shaqa-socodka. Qaabkan, xogta waxaa lagu raraa si gaar ah nidaam kasta oo u baahan baahidiisa, kadibna waxaa loo heli karaa turjubaan nidaamka fog ama dukaanka xogta halkaas oo falanqaynta la sameyn doono. Tani waxay hoos u dhigeysaa ku-tiirsanaanta ka-shaqeynta goobaha, waxayna ilaalisaa content asalka ah isbeddel wanaagsan ama qoto dheer marka tiknoolajiyadu hagaajiso. Waxaan ka shaqeyneynaa ELT Esri oo waxay u muuqataa in aan ka soo baxnay qiimaha dhexe ee isbedelkan markii aan u jeediyay 'tirtiridda ETL iyo T' shir sannadkii hore. ELT wuxuu ka dhigayaa wada-hadalku inuu si isdaba-joog ah u baddalayo seenyaalaha uu isticmaaluhu mar walba ku xiran yahay meel ka baxsan waayo-aragnimada GIS si uu u raadsado ama ula tashado qaabka guud ahaantiisa. Iyada oo si toos ah loogu soo dhejiyo xogta qaabka ELT,
Khuraafad: GIS waa bakhaar qumman oo loogu talagalay macluumaadka BIM
Waxaan hayaa labo eray: «Diiwaangelinta sharciga ah». Dukumiintiyada BIM badanaa waa diiwaangelinta sharciga ah ee go'aannada ganacsiga iyo macluumaadka u hoggaansanaanta, oo loo diiwaangaliyo falanqaynta cilladaha dhismaha iyo dacwadaha, canshuuraha iyo qiimeynta koodhka, iyo caddeyn gaarsiinta. Marar badan, naqshadeeyeyaasha iyo injineeriyada waa iney shaabadeeyaan ama cadeeyaan in shaqadoodu ay ansax tahay oo ay buuxiyeen shuruudaha qaas u ah iyo shuruucda iyo xeerarkooda la dabaqi karo.
Halkaa marka ay marayso qaar ka mid ah, waxaa hubaal ah in GIS noqon kartaa nidaamka diiwaangelinta ah ee lagu daydo BIM, laakiin markan, waxaan u malaynayaa in ay tani tahay sano ama ka sano ee ay marti, qotoma by nidaamka sharciga ah in xitaa waa versions computer ah hababka warqad ku salaysan. Waxaan raadineynaa aalada si ay u xiri hantida ee hantida GIS in repositories BIM, si ay macaamiishu ka faaiidaysan karaan gacanta version iyo warqadaha ee BIM dunida awood u leh inay khariidada in meel hantida macluumaadka a Qodobbada hodanka leh ee falanqaynta iyo falanqaynta iyo isgaarsiinta.
Si la mid ah qaybta doodda “astaamaha GIS”, isku-darka macluumaadka iyada oo loo marayo BIM iyo gIS-ada ayaa si weyn u caawin doonta moodallada macluumaadka ee GIS iyo BIM, kuwaas oo u oggolaanaya codsiyada in ay isku xidhaan Macluumaadka si lagu kalsoonaan karo oo u dhexeeya labada domains. Taasi micnaheedu maahan inay jiri doonaan hal nooc oo macluumaad ah, si loo soo qabto labada macluumaad ee GIS iyo BIM. Aad bay u kala duwan yihiin habka macluumaadka loo adeegsan karo. Laakiin waxaan ubaahanahay inaan hubino inaan dhisno tikniyoolaji dabacsan iyo heerar la jaan qaadi kara isticmaalka macluumaadka labada dhinacba leh aaminnimo sare iyo dhowrista waxyaabaha ka kooban macluumaadka.
Jaamacadda Kentucky waxay ka mid ahayd macaamiisha ugu horeeya ee na siinaya fursad ay ku galaan content Revit. UKy waxay isticmaashaa sawirro adag oo sawir ah si loo hubiyo in xogta saxda ah ay ku jirto xogta BIM si ay u taageeraan hawlgalka iyo dayactirka wareegga nolosha oo idil.
Isbedelka ku yimaadda awoodda hardware iyo barnaamijka, iyo u gudbinta xogta bulsho ee dijital ah, waxay abuurayaan fursado ay ku dhex galaan teknoolojiyada kala duwan iyo domains kuwaas oo aan waligood hore u jirin. Isku-dubaridka xogta iyo shaqo-la'aanta iyada oo loo marayo GIS iyo BIM, waxay noo oggolaanaysaa inaan ku guulaysto waxtarka, adkeysiga iyo degitaanka magaalooyinka, xarumaha iyo goobaha shaqada ee nagu wareegsan.
Si looga faa iidaysto horumarka tikniyoolajiyada, waxaan u baahan nahay inaan abuurno kooxo isku dhafan iyo iskaashatooyin, si aan u soo jeedinno xalalka dhibaatooyinka murugsan ee saamaynaya nidaamyada dhameystiran, ee aan ahayn kala-goysyo shaqo oo aan caadi ahayn. Waa inaan sidoo kale aasaas ahaan u beddelnaa qaabab teknolojiyad cusub, oo aan wax uga qaban karno dhibaatooyinka is-dhexgalka leh adkaynta iyo dabacsanaanta badan. Qaababka is dhexgalka ee GIS iyo BIM, oo aan maanta qaadnay, waa inay noqdaan "caddayn mustaqbalka" si aan uga wada shaqeyn karno mustaqbal waara.
Post Previous«Previous Sidee ayaan wiilkayga uga soo baxay Venezuela
Post Next Sida loo soo dejiyo sawirrada Google Earth - Khariidadaha Google - Bing - ArkGIS Imagery iyo ilo kaleNext »
Hal Jawaab u Jawaab "5 Murtida iyo 5 Xaqiiqooyinka Isdhaafsiga BIM - GIS"
Fikradaha xiisaha leh.
Haddii wax badan ayaan u cad yahay in mustaqbalka xiiso leh noo, Jid ka buuxa caqabadaha iyo fursadaha gudahood Geomatics ah, taas oo lagu ogaan doono mustaqbalka in guurto hal-abuurnimo, tayada iyo wada shaqaynta u sugnaaday.